Gaazexaa Bariisaafi miira barattoota Yunivarsitii Madda Walaabuu
Gaazexaa Bariisaafi miira barattoota Yunivarsitii Madda Walaabuu Featured
Barattootaaf ibsi seenaa Gaazexaa Bariisaa wayita kennametti
“Ani har'a kanan as dhufe eenyummaan koo, Oromummaan maal akka ta'ee baruufani. Dhugaasaa dubbachuuf hanga har'aa gaazexaa Afaan Oromoo haa argu malee, fedhii kiyyaan dubbisee hinbeeku. Kanin dubbisaa ture gaazixaa afaanot birootiin qophaa'aniidha”.
“Gaazexaan Bariisaa jedhamu ni jira jedhee yaadee hinbeeku. Gaazexaa Bariisaa har'an arge” kan jettuu barattoota Yunivarsitii Madda Walaabuu Muummee Gaazexeessummaa Waggaa 2fa Dhaabbataa Pireesii Itoophiyaatti Kutaa Qophii Gaazexaa Bariisaa, Jimaata darbe daaw'ataan keessaa barattuu Boonsituu Bakariiti. Seenaa gaazexichaa wayita dhageessetti gadduu kan eertu barattuun kun, “cunqurssaan Oromoorra gama barreeffamaafi afaaniitiin ga'e caalaatti kan natti mul'ate har'a” jechuuni rakkoo gaazexichii keessa tureefi jirurratti miira itti dhaga'ame kan ibsitu.
Akka Barattuu Boonsituun jettutti, Gaazixaa Bariisaa guddisuuf qopheessitoota gaazexichaa qofa utuu hintaane, Oromoo marti irratti hojjechuu qaba.
“Bariisaan akkuma maqaasaa ni bari'aaf jedheen yaada” jechuun Bariisaan gaazexaa sadarkaa federaalaatti Afaan Oromootiin qophaa'u tokkicha ta'ee torbanitti si'a tokko qophaa'uunsaafi gaazexoota dhaabbatichaatti maxxanfaman irraa hangaan ('size') xiqqaa ta'ee maxxanfamunsaa, ana qofa miti Oromoofuu gaaffiidha jetti. Gaazexichi akka guddatuuf Oromoon marti harka walqabatee hojjechuun qabna jechuun dhaamti.
Barataa Miiraa Maammadnuuris barattoota yunivarsiticharraa daaw'annaaf dhufan keessa tokko. Gaazexaa Bariisaa argee dubbisuu malee qabsoo akkamitiin akka as ga'e hinbeeku ture jedha. “Seenaa gaazexaa kana jechuun eenyummaa Oromooti” kan jedhu Miiraan, akka gaazexicha caalaatti beeku kan isa taasise barumsa ta'us, yeroo ifni mul'ate jedhamu kanatti hangi gaazexichaa gaazexoota Dhaabbata Pireesii biroo (Addis Zamaniifi Za Itoophiyaan Heeraaldi) irraa hangaan xiqqaachuunsaa kan nama gaddisiisuudha jedha.
Hanqachuun bal'ina gaazexichaatiif sababnii hanqinaa waraqaa akka ta'e himamus kun sababa isa hinamansiisne ta'uu eeruun, utuu hanqina waraqaa ta'eeti gaazexoonni biroonis waraqaansaanii hanqachuu qabu ture jedha.
Gaazexaan Bariisaa waajjiraaleettis ta'e dhaabbilee barnootaatti bal'inaan waan hinargamneef rakkoon gaazexaa kanarratti mul'achaa jiru kan furamuu danda'u lammiin hunduu baree walbarsiisee yoo gaazexicha ifatti baase guddachuu danda'aa jedha.
Dhaabbataa Pireesii Itoophiyaa daaw'achuutti hedduu kan gammadde ta'uufi barumsa guddaa argachuu kan dubbattu ammoo Barattuu Ikiraam Dhaqqabooti. Dhaabbatichatti akkaaataa gaazexaan tokko itti qophaa'u hubachuu eeruun, akkaataa qophii Gaazexaa Bariisaafi hiika maqaasaatii baruu akka dandeessellee ibsiteetti.
Akka ibsa barattuu kanaatti, teknolojiiwwan odeeffannoo ammayyaa'aa jiran faana miidiyaan maxxansaa dorgomaa ta'uuf keessuumaa Gaazexaa Bariisaa dorgomaa taasisuuf dhimma ofii godhachuun hunduu gaheesaa bahachuu qaba jetti.
Gaazexaan bariisaa gaazexoota biroorraa adda ta'uun hangasaa xiqqeessuun sirrii akka hintaanee kan eerte Barattuu Ikiraam, akkaataa gaazexicha guddisuun danda'amurratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbatti.
Rakkoon xiqqaachuu Gaaazexaa Bariisaa hanqina sharafaa alaa akka ta'e Dhaabbanni Maxxansaa Biraanninnaa Salam eereera. Hanqinni kun mudatus Gaazexaan Bariisaa waraqaa gaazexoonni 'Addis Zamanii'fi 'Za Itoophiyaan Heeraaldi' ittiin maxxanfamaa jiraniin akka maxxanfamu gochuuf murteen kan Dhaabbata Pireesii Itoophiyaati jedhamuu gabaasuun keenya ni yaadatama.
Torban kana/This_Week 43945
Guyyaa mara/All_Days 1635740